ओली सरकारको राष्ट्रवाद लम्पसारवादमा विलय भइसक्यो : डा कोइराला - pnpkhabar.com
You are at:Home»समाचार»ओली सरकारको राष्ट्रवाद लम्पसारवादमा विलय भइसक्यो : डा कोइराला
ओली सरकारको राष्ट्रवाद लम्पसारवादमा विलय भइसक्यो : डा कोइराला
By रबि धिताल on ६ जेष्ठ २०७५, आईतवार १६:३७ समाचार
सिन्धुपाल्चोक, ६ जेठ: नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले मुलुक निरङकुशतातर्फ धकेलिएको बताएका छन् । सिन्धुपाल्चोकमा भएको एक दिने कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै डा. कोइरालाले भने, ‘अहिलेको केपी ओली नेतृत्व सरकारले मुलुकमा अधिनायकवाद लाद्न खोजेको छ । ओली सरकारको राष्ट्रवाद लम्पसारवादमा विलय भइसक्यो ।’ यसअघि भारतलाई गाली गरेको नाटक गरेर जनतालाई भ्रममा पारी निर्वाचन जित्ने देखावटी षड्यन्त्र बुनेको आरोप लगाए ।
सदरमुकाम चौतारामा आयोजित कार्यकर्ता भेला तथा छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारको आलोचना गर्दै भने,‘नेपाली काँग्रेसले अबका दिनमा पनि विभाजित भएर गुटउपगुट सिर्जना गर्न थाले पार्टीलाई ठुलो क्षति पुग्छ । संघिय संरचना निर्माणदेखि नै नेपाली काँगे्रस चुक्दै गयो । अब हामीलाई जनताले पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको निगरानी गर्न जनमत दिएका छन् । हामीले राम्रो प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु छ ।’
काँग्रेस पराजय हुनुमा बामगठबन्धन भन्दा पनि पार्टी नेतृत्वको अनैतिक गतिविधि भएको उनले जिकिर गरे । उनले अब एमाले माओवादीको एकतामा काँग्रेस खुसी हुदै पाँच वर्षभित्र पार्टीलाई पहिलो बनाउन जनतासामु गएर संगठन निर्माणमा लाग्न सबैलाई निर्देशन दिए । केन्द्रीय सदस्य एवम् युवा नेता चन्द्र भण्डारीले, ‘मुलुक उख्खान टुक्काले मात्र चल्दैन् । मातृभूमिप्रति देखाएको प्रेमले मात्र सार्थक हुनसक्छ् । मुलुकको विग्रदो अवस्थालाई सुधार गर्न कांग्रेसको भूमिका अब अपरिहार्य छ ।’
सभापतिदेखि पार्टीका सबै पदधिकारीका विभिन्न गल्तीका कारण कांग्रेस निर्वाचनमा उनले चुकेको बताए । स्थानीय निर्वाचनदेखि चुकेको कांगे्रसले गति लिन र आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्दा निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परेको उनको भनाई थियो । सिन्धुपाल्चोक पार्टी सभापति विकास लामाले गुटउपगुटले गर्दा नै पार्टीलाई असर परेको बताए । पार्टीभित्र देखिएका गुटउपगुटलाई अन्त्य गेरर काँग्रेस अगाडि बढ्न सके पार्टी फेरी पनि पहिलो हुने उनले बताए ।
पार्टीलाइ बलियो बनाउन पार्टी निकट भातृ सगंठनको महत्वपुर्ण भुमिका रहने भन्दै नेपाल तरुण दल जिल्ला अध्यक्ष दोर्जे लामाले भने, ‘आ–आफ्नो ठाउँबाट पार्टीलाई चलायमान बनाउन सकिए मात्र काँग्रेस पहिलेकै अवस्था पुग्न सक्छ । अहिले सरकारले राम्रो काम गर्न सकेको छैन । जनताको हितमा काम गर्न सकेको छैन् । ओलीको राष्ट्रवाद छताछुल्ल भइसकेको छ । त्यसकारण जनताको आकर्षण फेरी पनि काँग्रेसमै हुनेछ ।’
चौतारा साँगाचोक गढि नगरपालीकाद्धारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा पूर्व जिल्ला सभापति भुपेन्द्रबहादुर थापा, प्रदेश सांसद निमा लामा, ईन्द्रावती पालीका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ, निमा ग्याल्जेन लामा, सचिव झलक नेपाललगायतले आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा क्षेत्रिय सभापति महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधिलगायत पार्टी निकट भातृ संगठनहरुको समेत बाक्लो उपस्थिति थियो ।